2 Xilli-Dhiig qubasho oo Reer Awdal guul weyn u horseeday iyo siraha dhiig daadashada togan ka farcama !! Dr.khadar-Libaaxley.
Thursday 7th February 2019 09:41:36 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
1.Horaantii 1984 diyaarada itoobiya ayaa duqeyn xoogle ka geystay qaybo ka mid ah Somaliland, Hargaisa, Wajaale, Borama iyo Xariirad,
waxa si ba’an loogu lee’day magaalada Borama oo duqeyn xoogani sabankaa ku dhacday, waxa ugu badan ee maalintaa duqeynta Borama ku dhintay (84 ciyaala iskuul ah, dhaganeysay dugsi hoose dhexe oo meel kaliya lagu wada aasay dhamaantood, waxa intaa dheeraa 24 kale oo waayeel ah oo dhaawac iyo dhimasho isugu jiray, sabankaa Borama waxa ay aheyd degmo ka mid ah gobolka maroodi jeex, imaatinkii madaxda xamar ka timi ay Borama timi iyo qiimeyntoodii xaaladu waxa ay dhashay ( magacaabistii Gobolka Awdal isla sannadkii 1984 , dadkii dhintay waxa ay illa fur u ahaayeen magacaabista guusha ku soo fool la hayd reer awdal ).
2. SNM gudagalkiiBorama dadkii kudhintay waxa ayilla fur iyogogol xaadh uahaayeen waxa aymaanta haystaan ReerAwdal oo ah, dawladnimohaba iska taagdarnaatee, dadkoodii oodib isugu soowada noqday siay u camiraanBorama iyo gobolkoodii,oo hadii aaneyxamar dumi lahayn ay maantaBorama tuulo yar ,oo maroodi jeexka mida iskaahaan la ahayd,degmadana ummado kaleoo koon furkayimi qabsan lahaayee, dabadeedna sidaabarlaawe yaal koon-furgoboladeeda ku baahsaniska noqon la haayeen .
Siraha kafarcama dhiig daadashadatogan :
Sideedaba indhahawajiga ku yaalamarkay bad-qabaan waxayarkaan walax kastaoo araga indhahawajigu ay qabtaan;hayeeshee indhaha qalbigawaxa lagu arkaa – ama cilmulbaadinka ( xaqiiqada xogahadahsoon ee dunidaiyo kuwa dalkaaad ku nooshahay)waa deeq illaahaybixiyo oo laasimkaduco iyo dikrifood saar uah.
Xaqiiq aanxaqiiq loo dhaafaajirin waxaah ( GuulahaAadamuhu gaadhay amaGuulaha ku soofool leh qof, qolo, qabiil,gobol ama qaranwaxa sunne buuxaoo aan shakilaheyn u ahdhimasho iyo dhiigdaata ; sida gaadhiwalba shidaal uutaayirka ku wareejiyo ugubaahanyahay!! Dhiiga illafurka u ahguulaha nolosha oodhan wuxu noqonkaraa mid xoolaadama mid bini-aadam ).
1. Illaahaywuxu malaa’iigta kuwar-galiyey in uuabuurayo Binu-aadam uuarlada/dunida masuul ugadhigo, malaa’iigtu waxayku jawaabeen illaahawma mid dhiigku daadiya oofasahaadiya ayaadu dhiibaysaa arladaiyadoo annagu aanukuu tasbiixsaneyno ooku dahirinayno!! ufiirso mudane akhriste( sharafka dhiigu leeyahay )si Nabi Aadam-caleyhi salaamu dhasho, dhulkadhiig baa lagusii rusheeyey, silamid ah markanin madax ahla soo dhaweynayoee rooga casloo sii dhigo,dhiiga dhulka kudaatay aabbeheen horteedayaa ahaa isdilkadhiiga khal-qigii inagahoreeyey ee aymalaa’igtu ogeyd ** waxauu gogol dhigu ahaa sirtaabuuranka , jiritaankaAadmiga iyo masuuliyada talladaarlada !!.
2. Nabi Ibrahim-caleyhi salaamsharfintii uu sharfay2dii malag eesuurada Bini-Aadamka iskusoo eekaysiiyey nabiibraahin marti gashiimowuxu uga dhigaygawraca ama kadhiijinta dhiiga dibishilis !! ka dhiijintadibigaa uu nabiibraahim gawracay waxaxigtay ( guushabishaaradii nabi ibraahimay malaa’igtu ugubushaareeyeen *** wiilkiicilmiga badnaa eehellay dhaxalkii aabbeheenaadam *** Nabi isxaaqcaleyhuma salaam ) ufiirso sharafkadhiigaasi lahaa wuxugogol dhig iyoceelalyo u ahaadhalashada nabi isxaaqiyo in silsiladanabinimadu marto hidihiisii.
3. Riyadii nabiibraahim uu kuriyooday isaga oogawracaya wiilkiisa ismaaciil, taas ooimtixaan rabi aheyd;sidaad wada ogtihiinillaahay wuxu kufurtay wiilkii yaraaee nabi ismaciilgawraca ama kadhiijinta dhiiga wankiiweynaa; sharafka dhiigaa wankaweyn ee lagufurtay ismaciil ayaagogol dhig iyoceelalyo u ahaa in Nabiismaciil sii jiro,tarantiisa iyo tafiirtiisana uuka mid noqdo( khaatimul-ambiyaa amakheyrul khalqi-laahi Nabimaxamed scw); gawracawankaasi furashada xisaabsanaaqiimaha iyo qaayihiisa waxauu ka midnoqday tiir kamid ah tiirarkaxajka.
4.Nabi maxamed awoowgiicabdi mudalib nidarkiiuu illaahay lagaleyee ku beegmaycabdilaahi ibnu cabdimudalib nabi maxamedaabbihii , waatii reerabtigii ku furteenbadalkiisa gawraca boqolgeela ah oogole joog ah,oo xisaabsan halkaaynu ka keennay xeerkamagta ninku inuu noqdo 100geel ah; furashadacabdilaahi ee gawraca100 kaa geelawaxa ay gogoldhig iyo ceelalyou aheyd dhalashada, jiritaanka iyonabinimada nabi maxamedSCW oo waatiiNabigu la haa (waxa aan aheyNabigii 2da gawracdhexdooda ) oo ahsababta astaanta uah jiritaankiisa, Nabinimadaiyo mudnaanta weynee darajada sarekheyru-khalqi-laahi.
5.Dagaalkii 2aad eeaduunka 18 milyanoo qof ayaaku dhintay sidataariikhdu wariso; qubashada dhiigaasi waxauu calanka usiday guusha (Dib u soolaabashada isra’el eeQudus- Bariga dhexeiyo soo bixistaanka horyaalkaquwada koowaad eedunida ee maraykanka).
6.Dagaalka ka qarxidoona Boqortooyada sucuudigaee bilawgiisana uguhor holci doona3Nin ee iskuqabsan doona Boqornimada dalkaasisucuudiga, kadibna siba’an ugu baahidoona wadanka oodhan; dhiig daadintadagaalkaasi ooxataa kabcada soogali doona; sirtaku jirtaa waxaytahay in uuyahay gogol dhigiyo bilowga ( waagacusub oo ubaryi doona islaamka iyodunida oo uu gadhwadeen kanoqonayo (Mahdigu).
7.Aroosyada reerka cusubmaalintiisa u horeysagawrac iyo dhiigxoolaad baa ladaadiyaa oo xisaabsangogol dhiga reerkayagleesha ah inuu u noqdoxirsi xidhiyo dayr !! xataailmo yar markauu dhasho waxasunne iyo jiritaankiisa laguaasaasaa gawrac xoolaad;sidaa daraadeed :( sirta kujirta dhamaan dalkadibadiisa iyo gudahiisadhiigagii iyo qudh-gooyooyinkii dalkadadkiisii ka dhex-dhacay eeay SNM sooqubtay iyo kiilaga qubay SNM ,dhiigii sokeeye eeku qubtay Awdal,Maroodi-jeex, Saaxil, Togdheer,Sool iyo Sanaag ;fool-xumooyinkii dhacay iyodhiig qubashadii baahsaneydee illaa maantaSool iyo Sanaagka sii qiiqaysadhamaantood waxa aygobbo’da’ iyo gabagabadau soo biyoshubanayaan gogol dhigaguusha furashada dalkaiyo xaaladaha koritaanka eedib u curashadamarkale jamhuuriyada Somaliland!!Sababtu waxa aytahay Beeriba beertaay ka waxsoo –saar iyomidho wanaagsan tahayayaa digada xoolahaiyo saxarada dadkaee qudhunka ahlagu nafaqeeyaa!!).